XOG: Rag askar dowladeed iska dhigaya oo DHAC ka gaystey guryo ku yaalla Degmada Hodan | Hadalsame Media
Home Wararka XOG: Rag askar dowladeed iska dhigaya oo DHAC ka gaystey guryo ku...
XOG: Rag askar dowladeed iska dhigaya oo DHAC ka gaystey guryo ku yaalla Degmada Hodan
(Muqdisho) 01 Abriil 2019 – Xilli xaalad deg deg ah lagu soo rogay magaalada Muqdisho si loo xakameeyo amniga oo beryahaan dambe faraha ka baxay ayaa waxaa la qaaday tallaabooyin la isku dayayo in ammaanka caasimadda dib loogu soo celiyo.
Waxaa tillaabooyinkaa ka mid ah in guri guri loo baaro xaafadaha degmooyinka Muqdisho iyo wax kasta laga shakiyo.
Waxaa dhagax waaweyn oo shub ah la dhigay jidadka Muqdisho iyadoo gawaaridana la joojiyay, waxaana la arkayay dadka oo shaqooyinkooda lug ku tegaya maadaama gaadiidkii uusan shaqeyn karin.
Ciidammo gaar ah ayaa loo saaray inay guryaha Muqdisho baaraan, iyagoo baadi goobaya hub sharci darro ah iyo waxyaabaha qarxa, waxaase dhacday qiso aan la maleysanayn.
Degmada Hodan ayaa laga soo sheegay in rag ku labisan dharka ciidanka, garabkana uu kaga dheggan yahay calanka Soomaaliya oo qoryo sita ay galeen guryo halkaa ku yaalla iyagoo iska dhigaya inay yihiin ciidanka xasilinta Muqdisho.
Yeelkeede aan ahayn, waxayna guryahaasi ka qaateen wixii nacfi lahaa ee yaalley, sida aan ku helayno warar lagu kalsoon yahay oo aannu ka helnay dad goobjoog ah.
Dhanka kale, khubarada Soomaaliyeed ayaa arrimahan oo kale uga digay saraakiisha hogaaminaysa howlgalka amni ku soo dabaalidda Muqdisho, iyagoo ka codsaday in ay aad uga feejignaadaan dadka magacooda halleeynaya ee iyagoo dereeyskii ciidammada xiran shacabka baaranaya ama lacago baad ah ka qaadaya mararka qaarkood, iyadoo ay dadwaynuhuna horay uga walaacsanaayeen arrintan.
Todobaadkii tegey ayaa waxaa si xiriir ah caasimadda uga dhacayay qaraxyo gawaari loo adeegsaday iyo dilal qorshaysan, kuwaas oo lala eeganayay dadka rayidka ah iyo dhismayaasha dowladda, hase yeeshee waxaad mooddaa sidii waddooyinka loo xiray in arrintaasi xoogaa yaraatay oo uu amaankii soo hagaagey.
FG: Sawirka meesha kama muuqda lama xiriiro sheekadan
Previous articleKenya rebukes Somalia for taking maritime border row to The Hague
Next articleWar lagu farxo oo kasoo yeerey dhanka Baasaboorka Soomaaliya